မူဆလင်များမှ ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအား ယေရှုခရစ်တော်အား စွန့်ပစ်စေ၍ မိုဟာမက်အား တမန်တော်အဖြစ် အဓမ္မအသိအမှတ်ပြုခိုင်းပြီးနောက် ခေါင်းဖြတ်သတ်ပစ် | ngalone
← ကျားနာမျက်ကန်း- ဖိုးကျော့
“ဟေ့…. ဒီကောင်ကို ဘယ်သူကမှ ပစ်မသတ်ရဘူး.. နားလည်လား? ဒီကောင့်ကို သနားညှာတာသောအားဖြင့် ပစ်မသတ်ဘူး…. အေး ဒီကောင့်ကို ခေါင်းဖြတ်ပြီးပဲ သတ်မယ်…. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီကောင်က ကာဖိရ်… အစိုးရဘက်ကလူ…. အလ္လာဟ်ကို ရှိမခိုးတဲ့သူ….. ဒီကောင်ကို ထောက်ခံလျှင် ဒီကောင်လိုပဲ ခေါင်းဖြတ်ခံရပြီး သေမယ်ဆိုတာ မှတ်ထားပါ”
[ဗွီဒီယို ကြည့်ရှုရန် ဤYou Tube link ကို click ပါ: https://m.youtube.com/watch?v=rTisrEIv1H0&has_verified=1&oref=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2F%3Fclient%3Dmv-google&has_verified=1&layout=mobile&client=mv-google%5D